Mbipụta na ikike ihe osise | Law & More B.V.
blog » Nbipụta na ikike ihe osise
Nbipụta na ikike ihe osise
Otu n'ime isiokwu ndị a tụlere na iko ụwa nke 2014. Robin van Persie bụ onye mekọtara akara ahụ megide Spain na ọmarịcha isi okwu na ọmarịcha isi. Ọmarịcha arụmọrụ ya mekwara ka mkpọsa Calvé n'ụdị akwụkwọ mmado na azụmahịa. Azụmaahịa ahụ na-akọ akụkọ banyere Robin van Persie dị afọ 5 bụ onye na-enweta ntinye ya na Excelsior na otu ụdị mmiri na-enwu enwu. Enwere ike ịkwụ ụgwọ Robin maka azụmahịa ahụ, mana enwere ike ịnwe iji ikike nwebisiinka a emegharị ma gbanwee ya na-enweghị ikike Persie?
Eserese eserese bụ akụkụ nke nwebisiinka. Iwu nwebisiinka kewara ọnọdụ abụọ maka ihe osise ikike, ya bụ, eserese nke emere mgbe e kenyere ya ọrụ na eserese na-emeghị. N'agbata ọnọdụ abụọ a enwere nnukwu ọdịiche na nsonaazụ mbipụta na ikike ndị otu a metụtara.
Kedu mgbe anyị na-ekwu maka eserese ziri ezi? Tupu a zaa ajụjụ a ihe ngosi ihe osise bụ, oleekwa ikike ikike a ruru, a ga-ebu ụzọ zaa ajụjụ a bụ ihe osise. Nkọwa nke iwu ahụ enyeghị nkọwa zuru oke ma doo anya. Dika nkọwa ihe nlere 'Ihe oyiyi nke mmadụ, ma ọ bụ nke nke akụkụ ahụ ọzọ ma ọ bụ nke na-enweghị ya, n'ụzọ ọ bụla na-eme ya'.
Ọ bụrụ naanị na anyị elelee nkọwa a, anyị nwere ike iche na ihe osise gụnyere naanị ihu mmadụ. Ma, nke a abụghị ikpe. Na mberede, mgbakwunye: 'n'ụzọ ọ bụla ejiri ya mee' pụtara na ọ baghị uru maka eserese ma ọ bụ eserese, na-ese ma ọ bụ na-eche ya n'ụdị ọ bụla. Mgbasa ozi telivishọn ma ọ bụ caricature nwekwara ike ịdaba na eserese. Nke a mere ka o doo anya, na akporo okwu 'eserese' dị obosara. Ihe osise gụnyere video, ihe atụ ma ọ bụ ihe osise. Emeela usoro dị iche iche n'ihe metụtara okwu a na Courtlọikpe Kasị Elu kọwakwuru nke a n'uju karịa, ya bụ, a na-eji okwu ahụ 'Eserese' mee ihe mgbe egosipụtara mmadụ n'ụzọ amara. Enwere ike ịchọta nnabata a na njiri mara ihu na ihu, mana enwere ike ịchọta ya na ihe ọzọ. Dika ọmụmaatụ, udiri agwa ma ọ bụ edozi isi. Gburugburu ebe ahụ nwekwara ike ịrụ ọrụ. A ga-amata onye na-aga n'ihu ụlọ ebe onye ahụ na-arụ ọrụ karịa mgbe a kọwara ya na ebe ọ na-agaghị aga ma ọlị.
Enwere ike mebi ihe osise ahụ ma ọ bụrụ na onye egosipụtara ya ga-amata nke ọma na foto ma edepụtara ya. A ga-ekpebi ma ọ bụ enyere ọhụụ ihe osise ma ọ bụ na enyeghị ya ma ọ bụrụ na nzuzo karịrị nnwere onwe ikwu okwu. Ọ bụrụ na mmadụ nyere mmadụ eserese, a ga-eme ka ndị mmadụ mata ihe ngosi ahụ ma ọ bụrụ na onye ahụ kwuru okwu nyere ikike. Ọ bụ ezie na nwebisiinka nke ọrụ ahụ dị n'aka onye mepụtara ihe osise ahụ, ọ nweghị ike ịme ka ọha na eze mara ma ọ nweghị ikike. Akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ bụ na a naghị ekwe ka onye sere ya na-ese ihe ọ bụla. N’ezie, onye e sere ese nwere ike iji nkọwa ahụ maka ebum n’onwe ya. Ọ bụrụ n ’onye e gosipụtara chọrọ ime ngosipụta ọhaneze, ọ ga-enwerịrị ikike n’aka onye okike ya. E kwuwerị, Onye Okike nwere ikike nwebisiinka.
N'iburu nkebi nke 21 nke Iwu nwebiisinka, onye okike dị n'ụkpụrụ nke ikike ibipụta ihe osise ahụ n'enweghị ihe mgbochi. Agbanyeghị, nke a abụghị ikike zuru oke. Onye a doro onwe ya n'okpuru nwere ike imegide akwụkwọ a, ọ bụrụ na na enwere ezi uche dị na ya. A na-akpọkarị ikike nke nzuzo dị ka mmasị nwere ezi uche. Ndị ama ama dịka ndị egwuregwu na ndị nka nwere ike, na mgbakwunye na ezi uche, nwekwara ebumnuche azụmahịa iji gbochie mbipụta. Na mgbakwunye na mmasị azụmahịa, Otú ọ dị, onye a ma ama nwekwara ike inwe mmasị ọzọ. A sị ka e kwuwe, enwere ohere na ọ ga-emebi ihe ọ bụla emebi aha ya n'akwụkwọ a. Ebe echiche nke “mmasị nwere ezi uche” dị n'okpuru ebe ndị otu na-ajụkarị ikwere na mmasị ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ na a na-eduzi ọtụtụ usoro gbasara echiche a. Ọ bụ ụlọ ikpe ka ikpebi ma mmasị onye ahụ a kọwara na-enwe ya karịa mmasị onye rụrụ ya na mbipụta ya.
Ihe ndị a bụ ihe dị mkpa maka eserese n'aka nri:
ezi uche dị na ya
Ọ bụrụ na anyị atụlee ihe atụ nke Robin van Persie, o doro anya na o nwere ma ezi uche ma na azụmaahịa azụmahịa nyere nnukwu aha ya. Judlọ ikpe ekpebiela na enwere ike iwere mmasị ego na azụmaahịa nke onye egwuregwu kachasị dị elu dị ka mmasị nwere ezi uche na ntinye nke Nkebi nke 21 nke Iwu nwebisiinka. N'ikwekọ na edemede a, akwadoghị mbipụta na imepụta ihe osise na-enweghị nkwenye mmadụ gosipụtara na eserese ahụ, ma ọ bụrụ na ebumnuche ezi uche nke onye ahụ bụ mkpughe. Onye na-eme egwuregwu kachasị elu nwere ike ịnwe ego maka ikike iji foto ya maka nzube azụmahịa. N'ụzọ dị otú a, ọ nwekwara ike iji ego na-ewu ewu ya, nke a nwere ike ịbụ n'ụdị nkwekọrịta nkwado, dịka ọmụmaatụ. Ma gịnị banyere football amateur ma ọ bụrụ na a maghị gị nke ọma? N'ọnọdụ ụfọdụ, ikike ahụ na-emetụta ndị egwuregwu egwuregwu amateur. N ’ụlọ ọrụ Vanderlyde / ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ ikpe Sportarnestad, onye egwuregwu amateur na-emegide mbipụta nke foto ya na magazin kwa izu. E gosipụtara eserese a na-enweghị ọrụ ya na o nyeghị ikike ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ego maka mbipụta ahụ. Thelọ ikpe ahụ lebara anya na onye na-eme egwuregwu amateur nwekwara ikike ịnwe ego iji bụrụ onye amara ya ma ọ bụrụ na ewu ewu ahụ wee bụrụ uru ahịa.
Ọ bụrụ na achọrọ ka imebi ihe gị, ị nwere ike chọọ ka amachibido ya n'akwụkwọ, mana enwere ike iji foto gị. Ya bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ. Nkwụghachi ụgwọ a na-adịkarị elu adịghị oke mana ọ dabere na ọtụtụ ihe. Enwere ụzọ ihe anọ ị ga - eme maka ịda iwu nke ihe osise:
Akwụkwọ ozi nke akwụkwọ ịkpọ oku na nkwupụta nke ịhapụ ịnọ
Okwu ikpe maka usoro obodo
Ozugbo ọ pụtara ìhè na a na-emebi iwu ihe osise mmadụ, ọ na-adịkarị mkpa ịnweta mmachi nke mbipụta ndị ọzọ na ụlọ ikpe ozugbo enwere ike. Dabere na ọnọdụ ahụ, ọ dịkwa ike iwepụ akwụkwọ ndị ahụ n'ahịa azụmahịa. A na-akpọ nke a ihe ncheta. Usoro a na - esokarị okwu maka mmebi. E kwuwerị, site n'ime ihe megidere foto ahụ ihe osise, onye ahụ e sere ya nwere ike inweta mbibi. Ego esi akwụ akwụ ụgwọ dabere na mmebi ahụ mebiri, kamakwa na eserese na ụzọ esi egosi onye ahụ. Enwekwara ezigbo ego n’okpuru edemede 35 nke Iwu nwebisiinka. Ọ bụrụ na emebi iwu ihe osise ahụ, onye ahụ mehiere ihe osise ihe atụ ahụ mebiri emebi, a ga-atakwa ya ikpe.
Ọ bụrụ na emebibi ikike gị, ịnwere ike ikwu na emebi emebi. Can nwere ike ime nke a ma ọ bụrụ na edeworị mbibi gị ma kwenyere na emebi emebi ihe ndị na-amasị gị.
Willlọ ikpe ga-ekpebikarị ụgwọ nke ụgwọ ahụ. Ihe atụ abụọ a maara nke ọma bụ “foto iyi ọha egwu nke Schiphol” nke ndị uwe ojii ndị agha wepụtara nwoke nwere nwoke Muslim maka nyocha nlele na ederede n'okpuru foto a "Schiphol ọ ka dị mma?" Ọnọdụ nwoke na-aga n'ụzọ ụgbọ oloko ahụ nọ na-acha uhie uhie na-aga ije na akwụkwọ akụkọ Red Light District na-ejedebe na akwụkwọ akụkọ n'okpuru isiokwu ya bụ "Peeking na akwụna".
N'okwu abụọ ahụ, e kpebiri na nzuzo na-emetụta ikike nnwere onwe nke onye na-ese foto. Nke a pụtara na ịnweghị ike ibipụta foto niile ị na-ese n'okporo ụzọ. Ọtụtụ mgbe, ụdị ụgwọ a dị n'agbata euro 1500 ruo 2500.
Ọ bụrụ na, na mgbakwunye na mmasị nwere ezi uche, enwerekwa mmasị azụmaahịa, ụgwọ ahụ nwere ike ịdị elu karịa. Compensationkwụ ụgwọ ahụ na-adabere n'ihe ọ mechara bụrụ uru na ọrụ ndị ọzọ, ya mere enwere ike ruru iri puku kwuru puku euro.
N'ịtụle mmachi nwere ike ime, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji nlezianya mee ihe mgbe ị na-ebipụta eserese na ịnwa ike niile o kwere mee iji nweta ikike nke ndị nwere nsogbu. E kwuwerị, nke a na-egbochi ọtụtụ mkparịta ụka ma emesịa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu gbasara isiokwu ikike ikike ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnwere ike iji ụfọdụ eserese na-enweghị ikike, ma ọ bụ ọ bụrụ na ikwere na mmadụ na-emebi foto gị, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọka iwu nke Law & More.
Previous Post Orgba alụkwaghịm na ụmụaka
Next Post Ismhapụ onye isi ụlọ ọrụ